Izindaba - Iyini i-Globe Valve Futhi Isetshenziswa Nini?
Iyini i-Globe Valve Futhi Isetshenziswa Nini?
Amagilavu ​​eglobe ziqhutshwa ngentambo yesandla futhi zilawula nokujikeleza kwamanzi. Kodwa-ke, futhi zakha ukulahleka kwengcindezi okukhulu.
Ukukhetha i-valve efanele kuyadingeka, njengoba izinhlobo ezahlukahlukene zinemisebenzi ehlukene kanye nokusetshenziswa. Ezimbalwa zazo zinezifunda ezimbili kuphela: ezivulekile noma ezivaliwe. Abanye banika amandla ukusakazwa kuketshezi nokucindezela. Ama-valve ahlukile nawo abangela inani elihlukahlukene lokulahleka kwengcindezi. Ngokuya ngesimo, izici ezithile ziyadingeka.
Enye yezinhlobo ezivame kakhulu zama-valve yi-valve yomhlaba. Kule ndatshana emfushane, sichaza ukuthi ama-globe valves asebenza kanjani, kufaka phakathi izinzuzo zawo nokwehla kwawo.
Yini i-globe valve, futhi isebenza kanjani?
Ukunquma ukuthi ngabe i-globe valve ilungile yini kuhlelo lwakho lokusebenza, cabanga ngezici zalo eziyisi-3 eziyinhloko. Ekuqaleni, ama-valve womsebenzi oseceleni, akhombisa ukuthi ayavula noma avale ngokususelwa ekunyakazeni phezulu naphezulu kwesiqu. Okwesibili, bavumela, bayeke, noma bajikeleze uketshezi lokusakazwa kuketshezi. Amanye ama-valve anezindawo ezivulekile kuphela futhi ezivaliwe, kepha ama-globe valve angaklinya ukugeleza ngaphandle kokukuyeka ngokuphelele. Okwesithathu, bakha ukulahleka okukhulu kwekhanda kuqhathaniswa namanye ama-valve ahlukahlukene, i-tradeoff yezinsizakalo zokuphamba.
Asebenza kanjani ama-globe valve
Ukusuka ngaphandle, amagilavu ​​wembulunga anezinto ezintathu, isondo lesandla, isigqoko nomzimba. Ibhonethi ifaka isiqu, kanye nokuthi isondo lesandla liphenduliwe, isiqu sinyuka sehla senyuka ku-bonnet. Ukuphela kwesiqu kunento encane ebizwa nge-disk noma i-plug, engaba yinsimbi noma engeyona eyensimbi futhi ingatholakala ngezindlela ezahlukahlukene, kuye ngesidingo.
Phakathi kwezinzuzo ezinkulu zamavalvu wembulunga yikhono lawo lokuklinya noma lokulawula ukuhamba. Ngaphandle kokuvalwa noma ukuvuleka, ngokungeziwe bangavuleka ngokwengxenye. Lokhu kukuvumela ukuthi ushintshe ukujikeleza ngaphandle kokukuyeka ngokuphelele.
Okubi kakhulu kwamavalvu wembulunga ukulahleka kwekhanda okuphawulekayo okuqhamukayo. Ukulahleka kwekhanda, okubizwa nangokuthi ukulahleka kwengcindezi, kubhekisa enanini lokuzizwa kuketshezi lokumelana njengoba kugeleza ngamapayipi. Ukumelana ngokwengeziwe, ukucindezeleka okulahlekile. Amandla adonsela phansi, ukungqubuzana (ketshezi uma kuqhathaniswa nezindonga zepayipi), kanye nokuxokozela konke kubangela lokhu kulahleka. Amaphayiphu nokufakwa kubangela ukulahleka kwengcindezi ikakhulukazi ngesiphithiphithi.
Ama-glove valves aphoqa uketshezi ukuguqula imiyalo njengoba ihamba, ikhiqiza ukulahleka nesiyaluyalu. Inani langempela lokulahleka lithembele ezintweni ezinjengezinga loketshezi nokuguquguquka kokuhlikihla. Noma kunjalo, kusenokwenzeka ukubuyekeza ukulahleka kwengcindezi kusuka kuma-valve ahlukahlukene usebenzisa imethrikhi ebizwa nge-coefficient ye-L / D.
Uwasebenzisa nini ama-globe valve
Ama-valve weglobe asebenza kahle noma kunini lapho udinga ukulinganisa ukugeleza, kepha awudingi ukuba nengcindezi yenani lokulahleka kwengcindezi. Ezinye izinhlelo zifaka:
Amasistimu wamanzi wokupholisa umoya
Ama-feedwater kanye nezinhlelo zokuphakelwa kwamakhemikhali
Amasistimu kawoyela wokuthambisa
Khama amapayipi futhi usike nezicelo zokufafaza umlilo noma ezinye izinhlelo ezahlukahlukene zokuphepha komlilo ezenziwa ngamanzi
Ama-valve womhlaba awukhethi okungcono kakhulu kwezinhlelo zokulawula ama-valve ezinhlelweni zokufafaza umlilo, lapho ingcindezi iya ku-premium. Kunalokho, amavalvu omvemvane zisetshenziswa njalo.
Isikhathi Iposi: May-14-2021